Nyaya yeMari dzeKubatsirikana Yokonzera Kupesana Muvarairidzi
Gunyana 27, 2011
Gurukota rezvedzidzo, VaDavid Coltart, vasangana nevamiriri vemasangano evadzidzisi matatu ari munyika, kuti vakurukure nezvedambudziko rave kukonzerwa nemari dzekubatsirikana dziri kubviswa nevabereki mune zvimwe zvikoro.
Vamwe varairidzi muzvikoro zvemuHarare neBulawayo svondo rapera vakanga vachiramwa mabasa vachitsutsumwa nedanho rakanga ratorwa nevabereki, rekudimura mari dzavanopa varairidzi pamusoro pedzavanotambiriswa nehurumende.
Masangano evarairidzi anoti reProgressive Teachers Union of Zimbabwe pamwe neZimta, akatobuda pachena achiti haatsigiri nyaya yekuti varairidzi vapiwe mari dzekubatsirikana idzi, achiti zviri kukonzera kusawirirana mukati mevadzidzisi, zvikuru vemumadhorobha nevekumaruwa, avo vasiri kuwana mari idzi.
VaColtart vakaudza bepanhau reThe Herald kuti nyaya yemari dzekubatsirikana iyi haisi mhosva yavo sezvo vakawana iripo kare pavakagadzwa kuve gurukota.
Asi vaudzawo Studio 7 kuti mari idzi dziri kukonzeresa kusawirirana pakati pevadzidzisi, uye vanotarisira kuti dambudziko iri richagadziriswa munguva pfupi inotevera, mushure mekunge vazoita musangano nevose vane chekuita nedzidzo.
Mutungamiri weZimta, Amai Tendai Chikowore, vaudza Studio7 kuti sesangano rinomirira varairidzi vari kupiwa mari dzekubatsirikana pamwe nevasiri kupihwa mari idzi, chavanoda kuona ndechekuti varairidzi vose vabatwa nemaoko akaenzana.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa ku PTUZ paimire panyaya iyi.